AUX သို့ ဒေါ်လာ ၂၆ သန်း လျော်ကြေးပေး ပြီးနောက် Gree Electric မှ အယူခံဝင် ခဲ့သည် - Pandaily
AUX သို့ ဒေါ်လာ ၂၆ သန်း လျော်ကြေးပေး ပြီးနောက် Gree Electric မှ အယူခံဝင် ခဲ့သည်
Dec 08, 2021, 20:56ညနေ 2021/12/08 23:10:48 Pandaily
Zhejiang ပြည်နယ်၊ Ningbo Intermediate People ‘s Court ၏ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လူထုအခြေပြု စီရင် ချက်အရ တီ ထွ င်မှု မူပိုင်ခွင့် ကိုချိုးဖောက် သည့် အ မှုအား ကြားနာ ခဲ့သည်Aoke လေအေးပေးစက် သည် Gree Electric နှင့် Ningbo Yongge သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကို တရားစွဲ ခဲ့သည်။အခု ပြီးသွား ပြီ။ Gree Electric က AUX ေလ ေအး ေပး စက္ အတြက္ စုစုေပါင္း ယြမ္ ၁၆၇ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ ဒသမ ၃၁ သန္း) ခန္႔ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ အမိန္႔ ထုတ္ ထားသည္။
စီရင်ချက် နှစ်ခု စလုံးသည် Compressor ဟုခေါ်သော မူပိုင်ခွင့် နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါ မူပိုင် ခွင့် လျှောက်လွှာ သြဂုတ်လ 11, 2000 ဖြစ်ခဲ့သည်။ မူရင်း မူပိုင် ခွင့် Toshiba Carrier လေအေးပေးစက် စနစ် Co., Ltd., 2018 ခုနှစ်တွင် Toshiba AUX လေအေးပေးစက် မှ မူပိုင် ခွင့် လွှဲပြောင်း နေစဉ်, ဒါ ပေမယ့်လည်း လွှဲပြောင်း မတိုင်မီ တတိယ ပါတီ ချိုးဖောက် မှုများအတွက် ချိုးဖောက် မှုများအတွက် တာဝန်ယူ မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် နှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံး မှုများ ရရှိရန် အခွင့်အရေး လွှဲပြောင်း ။
အရသတင္းစာGree Electric ကယနေ့ အမှုသည် ပထမအကြိမ် သာ ဖြစ်ပြီး Gree က အယူခံဝင် ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Gree Electric မှပြောကြား ရာတွင် ဂျပန် မူပိုင်ခွင့် မိသားစု ၏ မူပိုင်ခွင့် သည်တရုတ် မူပိုင်ခွင့် ထက်များစွာ လျော့နည်း ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဥာ ဏ ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် ရုံး၏ ကျွမ်းကျင် သူများက သူတို့၏ တရုတ် မူပိုင်ခွင့် များသည် မတည်မငြိမ် ဖြစ်ပြီး မ မှန်ကန် ကြောင်း ဆုံးဖြတ် သင့်သည်။ “အခု ေလာေလာဆယ္ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက ပီ ကင္း ဥာ ဏ ပစၥည္း မူ ပိုင္ခြင့္ တရားရံုးမွာ မူ ပိုင္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ မႈနဲ႔ တရားစြဲဆို ထားျပီး တရားရံုးက
အရCailian ထုတ်ဝ ေရေး အိမ်ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Aosi က Gree Electric သည် မကြာသေးမီက Aosi အား ယွမ် ၁၆၇ သန်းခန့် လျော်ကြေး ပေးရန် ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ခဲ့သည်ဟု တုံ့ပြန် ခဲ့သည်။ ဒါကို AUX က တစုံတရာ တုန္႔ျပန္ ျခင္း မရွိပါဘူး။ “ကျနော်တို့ အနာဂတ် မှာ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အပေါ် အာရုံစူးစိုက် ခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော အသိဉာဏ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နှင့် နည်းပညာ ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မှု အဖြစ် နယ်ပယ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့် ဆက်လက် ပါလိမ့်မယ်။”
Gree Electric နှင့် AUX လေအေးပေးစက် များသည် မူပိုင်ခွင့် များနှင့် ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆို မှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Gree Electric သည် AUX လေအေးပေးစက် မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက် မှုအတွက် တရားစွဲဆို ခဲ့ပြီး လျော်ကြေး အတွက် တရားရုံး၏ ထောက်ခံမှု ကိုရရှိခဲ့သည်။ AUX သည် Gree Electric အား စုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၅၀ (ဒေါ်လာ ၇. ၈၈ သန်း) နီးပါး လျော်ကြေး ပေးရန် စီရင်ချက်ချ ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Gree က double break system ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြေငြာ ခဲ့သည်
AUX နှင့် တရားစွဲဆို ခြင်းထက် Gree ကို ပို၍ စိုးရိမ် သည်မှာ Gree ၏ မကြာသေးမီက စွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် Gree Electric ၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၄၇. ၀ ၈၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇. ၄၂ ဘီလီယံ) ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၆. ၅% ကျဆင်းခဲ့သည်။ မိခင် ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ၏အ သားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၆. ၁၈၈ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၇ ၄၆. ၃ သန်း) ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၅. ၆၆% ကျဆင်းခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက Gree နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Yinlong New Energy သည် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များသို့ ၀ င်ရောက် ရန် ကုမ္ပဏီက ထိန်းချုပ် ခဲ့ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏ အမျိုးမျိုးသော မဟာဗျူဟာ ကိုမြှင့်တင်ရန် မိုဘိုင်းဖုန်း အသစ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အချို့သော စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ ကဤ လှုပ်ရှား မှုများသည် ကုမ္ပဏီ အား လက်ရှိ ကျဆင်း မှုမှ ကယ်တင် ရန်ရည်ရွယ် သည်ဟုဆိုသည်။
News Sep 28 စက်တင်ဘာ 28, 2021